Lahatsary: ​​Fialana amin'ny lisitry ny fiantsenana miaraka amin'i Listrak | Martech Zone
Alahady 24 aprily 2011 Alarobia, Novambra 30, 2011 Douglas Karr
Indraindray indraindray ianao dia mizaha Youtube, mahita vatosoa ianao. Ity horonantsary avy any Listrak ity dia navoaka tamin'ny volana febroary rehefa namoaka ny vahaolana fialana amin'ny sarety fiantsenana izy ireo, saingy tiako ny hamoaka azy eto noho ny antony roa. Voalohany, topi-maso mahafinaritra momba ny fandaozana ny sarety fiantsenana… manaraka, horonan-tsary mahafinaritra izy ary manantena aho fa hamokatra bebe kokoa amin'izy ireo i Listrak.
Ity misy fanasongadinana vitsivitsy avy ao amin'ny Pejy fampahalalana momba ny vokatra Listrak:
Araka ny tranokalan'i Listrak, olana ny kalesy fiantsenana nilaozana an-tserasera ny vidin'ny mpivarotra antsinjarany 71% amin'ny fiovam-pon'izy ireo mitentina 18 tapitrisa tapitrisa dolara isan-taona. Ny tranokalan'i Listrak dia manana kajy fanarenana sarety nafoy hahafahanao manombatombana haingana ny fatiantoka anananao.
Ny vahaolana momba ny fialana an-tsoratr'i Listrak dia mamerina maka sary an-tsaina ireo sarety fiantsenana nilaozana ary manome fotoana hifaneraserana amin'ireo mpiantsena amin'ny alàlan'ny tolotra manokana sy fandefasan-kafatra mifandraika amin'izany. Amin'ny fampiasana ny rindrambaiko, ny fampielezan-kevitra amin'ny fandraisana andraikitra indray dia mety ho mailaka tokana na afaka mamorona ony mailaka hikolokoloana ny fiovam-po ianao.
Ny fialana amin'ny sarety fiantsenana dia tsy antony iray fotsiny amin'ny eCommerce. Ny tranokala rehetra izay ampiasaina amin'ny ezaky ny varotra miditra matetika dia manana fahalemena izay very ny mpitsidika amin'ny fizotry ny fiovam-po. Indraindray, izany dia fotsiny satria ny fisehosehoana tsy dia tsara dia tsy manome tosika ny hirosoana bebe kokoa. Ny olana hafa dia mety ho endrika midadasika, fotoana fanamorana pageload, na olana hafa.
Raha afaka mamorona fitaovana hampidirana an-tsehatra an'io mpihaino io ianao dia ho hitanao matetika fa ny tahan'ny fiovam-ponao dia mihoatra ny fiovam-po rehetra azonao amin'ireo mpitsidika vaovao.
Ahenao ny haben'ny rakitra CSS anao 20% na mihoatra